ရင်သွေးငယ်တို့အတွက် စနေ၊တနင်္ဂနွေ ဘုရားဝတ်တက်ပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ရင်သွေးငယ်တို့အတွက် စနေ၊တနင်္ဂနွေ ဘုရားဝတ်တက်ပွဲ
ရင်သွေးငယ်တို့အတွက် စနေ၊တနင်္ဂနွေ ဘုရားဝတ်တက်ပွဲ
ကပေတို ့..သင်္ဘောသီးညီနောင်တို ့..ဂျာပွန်ဒါ့ပုံဆာတို ့..ကမှော်ချာတို ့..အလကားနေအလကား..
သိမ်သိမ်မွေ ့မွေ ့၊
ချပ်ချပ်ရပ်ရပ် ဖြစ်စေချင်လို ့ပါ..ဖြစ်စေချင်လို ့ပါ
တားတားရယ် မူးရင်လည်း အိမ်ပြန်အိပ် အဲ့လိုတော့ ဝါးလုံးရှည်နဲ့ယမ်းပါနဲ့ကွယ် ….
ဦးဦးတို့မှာ လူမျိုး ဘာသာ သာသနာ အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေရတာပါ ….
ဟင်း….မကျေဝူးကွနော် …ငါတို့နိုင်ငံလာ အုပ်စိုးတွားတဲ့ ဂျပုတွေ ….
လက်စားချေဦးမှ လက်စားချေဦးမှ ……..
ထပ်ခါထပ်ခါ အသွေးထဲအသားထဲက ချေဦးမှ …
ဟုတ်။ ကျနော်လည်း တက်ဖို့လိုတယ်ထင်လို့ သွားတက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းချိန်ပြောင်းထားပါ တယ်။ နေ့လည် ၂ နာရီကနေ ၃ နာရီခွဲလောက်ထိပါ။ ကလေးတွေကို ဦးချနည်းလေးကစ ထိခြင်းငါးပါးနဲ့ ထိပြီး ဦးချတတ်အောင် အရင်သင်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားရှိခိုးတယ်။ နောက် တရားထိုင်တယ်။ ပြီးရင် အလှူရှင်တွေက မုန့်ဝေပေးတယ်။ ကျနော်တို့လူကြီးတွေအနေနဲ့ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို မနေကြပဲ သင်တန်းကို သွားရောက်လေ့လာလို့ နည်းကောင်းလေးတွေ နာယူနိုင်ကြ ပြီး ကိုယ်နဲ့ နီးစပ်ရာ ဝန်းကျင်မှာ ပြန်လည် ပို့ချ ဖြန့်ဝေဖို့လည်း လိုအပ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ရပ်ကွက်လိုက်ကနေ မြို့နယ်လိုက်မှစလို့ တဖြည်းဖြည်း သာသနာ့ရောင်ခြည်တွေ ဖြန့်လင်းနိုင်စေဖို့ အားလုံးဝိုင်းဝန်းကြိုးစားကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်း လိုက်ရပါတယ်။
ဆရာမလေး ဝူဝှူး ရယ်
နောက်ကို စောစောလေး တင်ပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ ။ ၂ ရက် ၃ ရက်လောက် တင်ကြိုပေါ့ ။
ဒီလိုပွဲမျိုးတွေ ရှိမှန်း အခုမှ သိရတယ်ဗျာ
ကျုပ် မိတ်ဆွေ ရန်ကုန်သားကြီး မင်းပေါက်စိုး ကို ကားလက်မှတ် လမ်းပို ့ပေးပြီး မန်းတလေး ကို လာတက်ခိုင်းချင်လို ့ပါ ။
သိတဲ့အတိုင်းဘဲ လေ ။
အဲဒီ မင်းပေါက်စိုး ဆိုတာ က အားရှိ မူတူးပေါက်ဖော် လုပ်နေတာကလား ။ မိတ်ဆွေကောင်း တို ့ဝတ္တရားနဲ ့အညီ ၊ ကူညီပေးချင်လို ့ပါ ဗျာ ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နော် မဝူဝှူးရယ်
ဟူးဟူးတင်တာ မပြည့်မစုံနဲ့။ လိပ်စာလည်း မပါဘူး။ ရန်ကုန်မြို့မှာလား၊ နယ်မှာလား၊ နိုင်ငံဂျားမှာလား။။။။ ဘယ်ကားစီးလာရမလဲ။ ခလေးဆိုတော့ အစားအသောက်ပါရင် ပိုကောင်းမယ်။ စာချည်အံနေရရင် သိပ်မနိပ်ဘူး။။။။။။ သင်တန်းကတော့ အပတ်စဉ် ဖွင့်ပေးထားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် သဂျီးကို အွန်လိုင်းကနေ သင်ပေးပါ။ သူက အခြေခံက စမှရမှာ။
တခြားဘာသာတွေမှာတော့ ငယ်ကတည်းက အပတ်စဉ်တိုင်း church ကျောင်းတက်ရတယ်။
ဗလီတက်ရတယ်။ အဲဒီမှာပဲ ကိုယ့်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေး အသိတွေ သင်ယူခွင့်ရကြတယ်။ အဆုံးအမတွေ အပတ်စဉ် နာကြားကြရတယ်။ ဒါကိုအတုယူသင့်တယ်။ ငယ်ကတည်းက အပတ်စဉ်တိုင်း ဘာသာရေး အသိတွေထည့်ပေးမယ်ဆိုရင် အခြေခံကောင်းသွားမှာမို့ ပစ္စုပ္ပန်ရော အနာဂါတ်အတွက်ပါ အသိတွေက ထိန်းပေးသွားမှာပေါ့။ ဒါဆို ကြီးလာတဲ့အခါ ငါးပါးသီလကို လွယ်လွယ်မကျိုးပေါက်ရဲတော့မှာမို့ အလားအလာတွေ ကောင်းလာဖို့ပဲရှိပါတယ်။
ကျနော့ကြော်ငြာလေးမှာ နန်းရှေ့လို့ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မန်းမှာပါလားလို့ ဆက်တွေးလို့ ရတယ်လေ။ ကျနော် လည်း ရလာတဲ့ ကြော်ငြာလေးကို တန်းပြီးဝေမျှလိုက်တာမို့ အရှိအတိုင်းပဲ တင်လိုက်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာလေး ဝှူဝှူး ရေ
ဆရာလေး ဝှူဝှူး လို ဘဲ တွေးမိပါတယ် ။
ကျုပ်တို ့ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟာ လွတ်လပ်လွန်းအားကြီးလို ့ဘုရားမသွား ၊ ကျောင်းမသွားဖြစ်တဲ့ လူတွေ အများကြီးပါဘဲ ။
ကျုပ်တောင် မှ ၊ တစ်လ တစ်ခါတောင် ဘုရား မရောက်ဖြစ်ဘူးဗျာ
ဆရာလေး ဝှူဝှူး ရေးပြမှဘဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်သတိထားမိတယ်
စကားမစပ် နံပါတ်-၄ မှာ အဆင်ပြေပါရဲ ့လား
ကို windtalker ဘာကိုမေးတာပါလဲ။ နံပါတ် ၄ ဆိုတာ ကျနော်မသိပါ။ ကျနော်တင်တဲ့ပို့စ်မှာလည်း အဲဒါမပါပါ။ နောက်ပြီး ကျနော့အယူအဆလေးတစ်ခု ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ ဘုရားသွား၊ကျောင်းသွားဖြစ်ဖို့ထက် ဘုရားအဆုံးအမ ရင်ထဲကိန်းဖို့က လိုရင်းပဲလို့မြင်မိပါတယ်။ ခုလို ကလေးတွေအတွက် ကြော်ငြာပေးရတာကလည်း ဘာသာရေးအသိလေးတွေ ထည့်ပေးဖို့တာဝန် လူကြီးတွေ မှာရှိတယ်ဆိုတာလေး နှိုးဆော်ပေးလိုက်တာပါပဲ။ မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးဟောထားသလို ပြောရရင် ရုပ်နာမ် ဖြစ်ပျက်ကို ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မြင်တွေ့နိုင်ရင် ငါ့ဝမ်းထဲမှာ ဘုရားပွင့်ပြီလို့ မှတ်လိုက်ပေတော့တဲ့။ အဲလိုခန္ဓာတွင်းမှာ ဘုရားပွင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြလို့ နေ့စဉ် ခန္ဓာတွင်းက ဘုရားကို အချိန်ပြည့် အားရပါးရဖူးတွေ့နိုင်ကြပါစေလို့ ….
နံပါတ် ၄ ဆိုတာ 19/11/2011 က ၊ ဝှူဝှူး ထိုင်သုံးခဲ့တဲ့ ….
ကိုပေက စာရေးသူသုံးခဲ့တဲ့အင်တာနက်ဆိုင်က ကွန်ပြူတာကိုထပ်သုံးခဲ့တာလား
သည်တချက်တော့ အိုင်ပီဇိ ရှော်သွားပီဗျ…..
တကယ်တော့ ကပေဟာအင်ထှာနက် ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဗျ…